Apple Oo Bilawday Nalalka Cusub Ee Midnimada Leh Si Ay U Taageerto Sinnaanta Iyo Cadaalada Jinsiyada | IPhone News
Apple waxa ay daah-furtay Nalalka Cusub ee Midnimada Si ay u taageerto Sinnaanta iyo Cadaalada Jinsiyadaha
Mid ka mid ah waxyaalaha in Waxaan aad ugu jecelnahay Apple Watch waa qaybaha, Suurtagalnimada xidhashada saacad cusub maalin kasta, suurtogalnimada shakhsiyadda, wax kasta oo ku xeeran Apple Watch. Waxaa jira garaacyo ay wadaagaan dhammaan saacadaha, gaar ahaan moodooyinka cusub, iyo xitaa gaar u ah moodooyinka Nike iyo Hermès. Dhammaantood waxay u shaqeeyaan si fiican, tanina waxay noqon kartaa sababta Apple uusan waligiis u furin gallery ee qaybaha qaybaha saddexaad. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood waxay naga yaaban yihiin Cupertino iyagoo bilaabaya goobo aan la ogeysiin hore ... Hadda, waxay hadda bilaabeen nalalka cusub ee Midnimada, saaxadda cusub ee hindisaha Sinnaanta Jinsiyadaha iyo Caddaaladda. Sii wad akhriska aan ku siineyno dhammaan faahfaahinta.
Kaliya hal sano ka hor oo leh watchOS 7.3 ayaa soo gaaray goobta Midnimada Sababtan la mid ah ee taageerada Sinnaanta iyo Caddaaladda Jinsiyadda, oo ah goob sidoo kale la timid suunka xusuusta. Maanta, Apple ayaa naga yaabisay iyadoo dib u habayn ku samaynaysa suunka xusuusta iyo garaacista, dhab ahaantii, waxay bilawday ogeysiin ku socota dhammaan isticmaalayaasha Apple Watch si ay isugu dayaan goobtan cusub. Dial "analog" ah oo markii ugu horeysay bedelaya naqshadda classic cirbadaha cirbadaha oo ka dhigaya inay u dhaqmaan sida neon-ka oo muujinaya asalka goobta oo leh midabada calanka Pan-American. By habka, aad awoodid si toos ah ula soo degso iyada oo loo marayo gallery of spheres of your Apple Watch.
Apple hadda waxay soo saartay daabacaadda gaarka ah ee Apple Watch Black Unity Braided Solo Loop iyo isbarbardhigga Unity Lights wejiga ay dhiirigelisay Afrofuturism, falsafad sahaminaysa waayo-aragnimada madow iyada oo loo marayo sheeko sayniska, tignoolajiyada iyo is-xoojinta. Iyada oo qayb ka ah daahfurkan, Apple waxa ay taageertaa ururrada diiradda saaraya horumarinta ka mid noqoshada sayniska iyo tignoolajiyada bulshooyinka midabka leh iyada oo loo marayo Hindisaha Sinnaanta Jinsiga iyo Caddaaladda.
Naqshadeeyeen xubnaha iyo xulafada bulshada hal-abuurka madow ee Apple si ay ugu dabaaldegaan taariikhda madow iyo dhaqanka, Apple Watch Midnimada Madow ee Braided Solo Loop iyo daawashada isku habboonaanta Unity Lights waxay u dabaaldegaan jiilasha madowga Mareykanka ee qurba-joogta Afrika. Naqshadani waxay astaan ​​u tahay aaminaadda la wadaago ee baahida loo qabo adduun badan oo loo siman yahay. Midabada casaanka iyo cagaarka ah ee firfircoon ee calanka Pan-African waxay u muuqdaan sida nalal daalacan oo ku yaal kooxda madow.
Suunka Midnimada Madoow ee Solo Loop waa mid cajiib ah… Suunka waxyooday afrofuturism taasina waxay astaan ​​u tahay baahida loo qabo adduun cadaalad ku dhisan. Waxa laga sameeyay polyester dib loo warshadeeyay (oo leh in ka badan 16000 fiil), waxay leedahay a madow oo leh laamo cagaar iyo casaan. Ku fiican in lagu daro safka cusub ee Unity Lights. Waxaa lagu qiimeeyaa 99 euro oo aad horeba ugu haysatey dukaanka Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple waxa ay daah-furtay Nalalka Cusub ee Midnimada Si ay u taageerto Sinnaanta iyo Cadaalada Jinsiyadaha
iOS 15.3 iyo watchOS 8.4 hadda waa la heli karaa
Apple waxay u dabbaaldegtaa Sannadka Cusub ee Dayaxa iyo Bisha Madaw oo leh caqabado cusub oo Apple Watch ah